Popular software – Windows – Page 25 – Vessoft
Popular software – Windows – Page 25
Imenenja esikahle ukulanda video amafayela kusuka Facebook namanye amasevisi ethandwa. Isofthiwe kwenza ukuguqula amavidiyo e takhiwo ehlukahlukene alalelwayo kukhishwe amathrekhi audio kusukela isiqophi amafayela.
The kulula ukuyisebenzisa Converter ukuguqula amafayela video in ezahlukene abezindaba takhiwo. Isofthiwe isekela ethandwa kakhulu abezindaba izakhiwo kanye ukucutshungulwa batch amafayela.
uTorrent 3.5.0.44090 futhi 3.5.0.44266 beta
Iklayenti ethandwa kakhulu ukulanda futhi wabelane amafayela internet. Isofthiwe umkhiqizo okusezingeni nezinkulu isethi izici ewusizo.
I ithuluzi elinamandla ukushintsha search, ukucubungula kanye nokuqapha esiningi ulwazi inthanethi. Isofthiwe ikuvumela okuthekelisa idatha etholwe takhiwo ehlukahlukene.
Pale Moon 27.6 Stable futhi Portable
Isiphequluli kuhloswe nesanda ngesivinini kanye operation esitebeleni on the internet. Isofthiwe kuvumelana izilungiselelo kakhulu kanye nezandiso of Firefox.
Isofthiwe ukurekhoda izenzo computer ukuze isiqophi amafayela. Futhi isofthiwe kwenza ukurekhoda umsindo ukudala kubukiswa izinga.
Umdlali edume ngokusekelwa multiple abezindaba takhiwo. Isofthiwe uyakwazi ukwandisa amathuba ayo ngokuxhuma anezele.
Ithuluzi Functional ukulanda amavidiyo service YouTube. Isofthiwe izilungiselelo eziseqophelweni ukuguqulwa ifayela.
Isiqophi converters Converters zomsindo
The kulula ukuyisebenzisa Converter abezindaba amafayela ezinhlobo ezehlukene. Isofthiwe isekela ukucushwa ongakhetha ehlukahlukene kanye wanezela nemiphumela ethile ngesikhathi ukuguqulwa.
Isofthiwe ukuphatha computer eyihlane. Isofthiwe inikeza amalungelo ukufinyelela kwamanye amakhompyutha inkonzo izinga.
Isofthiwe sokulingisa umdlalo on the virtual midi-keyboard. Isofthiwe kwenza ukucacisa Ukubukeka of the music futhi ngezifiso insimbi yomculo nezidingo umsebenzisi.
Iklayenti ukulanda futhi wabelane amafayela kwi-inthanethi. It has amathuba ebanzi of izilungiselelo futhi ikuvumela ukuba uhlole amafayela.
Ukubethelwa Akwazi ukugcina
Isofthiwe inhlanganisela yezimpawu elikhulu amathuluzi ukufaka ikhowudi kwimininingo yonke. Kukhona kungenzeka ukufaka ikhowudi kwimininingo yonke okuqukethwe the angaphandle kanzima kanye nezinye izinto ezithwala idatha.
Ithuluzi ukulanda futhi ukuguqula video amafayela kusuka service YouTube. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukuguqula amafayela kuma takhiwo athandwayo futhi ngezifiso izinga ukuguqulwa.
Isofthiwe yakhelwe ukulanda amafayela video kusukela inkonzo ethandwa Youtube. Isofthiwe uvumela ukulanda amavidiyo high ukuguqula wabayisa ngetakhiwo ethandwa.
Amathuluzi i thwebula lula amavidiyo kusukela service popular YouTube. Isofthiwe ikuvumela ukulanda amafayela video in high kukhishwe ithrekhi yomsindo.
Free Download Manager 3.9.7 futhi 5.1.33 beta
Waterfox 55.2.2 Stable futhi Portable
Samsung Kies 3.2.16084.2 futhi 2.6.4.17113